DARLINGTON CALIFORNIAN: SHARAXAAD KU SAABSAN SIDA KOR LOOGU QAADO GURIGA - SOOSAARKA DALAGGA
Noocyada daryeelka ee darlingtonia guriga Kaliforniya
Darlingtonia Californian waa booqasho naadir ah oo ku yaalla guryaha dadka jecel qolalka qolka, sababtoo ah waa warshad aad u adag oo waa lagama maarmaan inay abuurto xaalado gaar ah.
Darlingtonia Californian waa sida "cobra ah oo soo tuuray daboolka. Wixii qaabdhismeedka gaarka ah ee caleemaha, ubaxa ayaa loo magacaabay lily cobra. Asal ahaan ka yimid Darlingtonia oo ka yimid California iyo Origens. Waxaa laga helaa warshad dhulkeeda ah oo ku taalla biyaha iyo ilaha, halkaas oo biyaha qabowgu u socdo. Geeddi waa dhif iyo naadir, sidaas darteed ilaaliya Heshiiska Washington.
Waa wakiil cad oo ka mid ah sarracienia cireedka, dhirta dhirta cayayaanka. In dabeecadda, geela ka tago gaadho mitir dhererka. Inta lagu jiro kobcitaanka, waxay abuuraan nooc ka mid ah maqalka. Caleemaha waxay leeyihiin hooska casaan-cagaaran, talooyinka caleenta waxay u kala baxaan qaab.
Markuu ku kaco jawiga dabiiciga ah, waxaad daawan kartaa fiidiyowga:
Dhirta ubaxu waxay ubaxday ubaxyo guduudan ama casaan leh lix sentimitir. Caleemooyinkeeda waa dabagal buuxa nectar macaan, soo jiidasho leh urka cayayaanka.
Qaadashada weel ubax leh nectar macaan, cayayaanka waxaa la qabtaa timaha dheer, ma jirto fursad ah ka soo baxaan cawska u orday ee geedka. Natiijo ahaan, cayayaanka ayaa hoos ugu dhacaya hoose ee jug, halkaas oo ay ku jajabiso caawimaadda jeermiska iyo bakteeriyada ku jira dareeraha ubaxa.
Heerka geedka geedka ah ee dabiiciga ah ayaa gaaraya 80 sentimitir, xaaladaha qolka darlingtonia ayaa kora maya ka badan 20-30 cm.
Xaalado kala duwan ee koritaanka darlingtonia California:
Darlingtonia waxay u baahan tahay xaalado gaar ah ee koritaanka. Waxay ubaahan tahay qaboojinta iyo qoyaanka xididadahalka kuleylka iyo qorraxda loogu talagalay qeybta above. Heerkulka carrada ee hooseeya waxaa lagu gaari karaa barafka carrada.
Dabeecadda, warshadu waxay helaysaa shuruudahan, oo ku yaalla bangiyada wabiyada buurta ah, taas oo biyaha biyuhu ay leeyihiin heerkul hooseeya.
Nalalka iyo heerkulka koritaanka
Darlingtonia waxay ku kori kartaa shoogga qaar, laakiin waxay jecel yihiin iftiin dhalaalaya. Kaliya waa suurtagal in la oggolaado in lagu garaaco ubax ka mid ah raajooyinka tooska ah, kuwaas oo ka badan waxyeello ka badan hooska.
Sidaa darteed, waxaa lagugula talinayaa inaad u dhowdahay ama aad dhigato Galbeedka ama daaqadaha bari. Iyadoo wacyigelinta waqooyiga, nalalka ayaa la seegi doonaa. Oo hadday daaqadaha qolka la kulmaan koonfur, markaas geedka waa in laga tagaa daaqadda.
Hubinta heerkulka wanaagsan ee beerashada - ugu adag ee dayactirka ubaxa. Darlingtonia waxay u baahan tahay heerkulka qiyaastii 18 darajo. Inta lagu jiro xilliga nasashada - kama badna 10 darajo.
MUHIIM. Warshadda xilliga qaboobaha waa inay nasato, taas oo ah, iyada oo loo marayo muddada lagama maarmaanka ah ee nasashada.
Xilliga jiilaalka, geedka ayaa u baahan inuu hubiyo heerkulka 8-10 digrii oo yareeya xaddiga biyaha. Helitaanka iftiinka wakhti qaali ah kuma koobna. Darlingtonia waxay ubaahan tahay iftiin sanadka oo dhan.
DAREEN. Ficil kasta oo firfircoon - uur qaadid ama xitaa u guurto meel kale - xilliga nasashada ee ubaxa waa wax burburin. Leave ubax jiilaalka oo keliya.
Warshad biyo ah oo ku nool xaaladaha dalagyada dabiiciga ah, waxaad u baahan tahay wax badan. Waxaa lagugula talinayaa inaad xajiso dheriga ku dabaalanaya weelasha, taas oo marmar ku shub biyo qabow.
MUHIIM. Biyaha waa bilaash. Sidaa daraadeed, waa lagama maarmaan in la difaaco ama la hakiyo. Biyo diirran ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa.
Dhisida dareenka si loogu helo potassium iyo magnesium. Way ka fiicantahay inaadan ku quudin, adoo siinaya cunto leh carrada ku habboon.
Shuruudaha huurka hawada
Qoyaan loogu talagalay darlingtonia u baahan kordhay. Heerkeedana waxaa lagu hayaa daaweyn joogto ah, oo lagu rakibo ilo feylaal ah iyo weelasha buuxsamey biyaha oo u dhow ubaxa.
Xeerarka quudinta iyo quudinta
Wixii beerto darlingtonia waa isku dar ah peat, ciid caleen, ciid iyo dhuxul (2x0, 5x0, 5x0, 5). Ciidadu waa inay ahaato mid fudud oo aan nafaqo lahayn. Dhammaan nafaqooyinka lagama maarmaanka ah ee ubaxa waxay ku helayaan sawirro iyo cayayaanka, kuwaas oo u baahan in lagu tuuro dabinka. Darlingtonia waxaa lagu quudin karaa kaneecada ama dukhsiga.
Darlingtonia uma baahna xubin joogto ah, waa ku filan inaad sameyso hal mar 3 sano, waa macquul iyo wax yar. Marka beerista geedka loo wareejiyo weel wayn. Waxaa lagu talinayaa in la koro ubax bukaanka, laakiin dhererka ballaaran ee ku filan.
Tan iyo ubaxa dhif ah ayaa la beeray, waa inay lahaataa meel ku filan si loo sameeyo nidaamka asaasiga ah.
WARBIXIN. Haddii aad isku dardar bixisid waxyaabo gaar ah oo loogu talagalay ku-tallaalidda macquul ma'aha, waxaad ka iibsan kartaa ciidda loogu talagalay azaleas.
Warshadani uma baahna manjooyin. Noocyo qurux badan oo caleemo ah ayaa si madaxbannaan u dhisan.
Dib u dhalashada ubaxa-cobra
Ka dib markii ublington darlingtonia foomamka miro ka buuxsamay abuur tiro badan.
Waxaa lagu dhajiyaa dusha sare ee ciidda bacrin ah sanduuq guri. Abuurka aan la rusheeyeen on top, sababtoo ah waxay u baahan yihiin nal badan oo ah Gagaash.
Kaca Darlingtonia ka soo abuur adag ku filan, marar dhif ah oo maamula si ay u gaaraan biqilka.
Waxaad ku dhufan kartaa dhirta adoo qaybinaya baadiyaha. Samee inta lagu jiro transplanting guga. Kala saar dhirta qaangaarka leh gabal of rhizome. Dhig dhig qaybta ugu muhiimsan ee lagu rusheeyey dhuxusha si looga fogaado ciriiriga.
Dhamaadka guga ama xagaaga hore ubaxa xayawaanka ubra ubaxyo madow ama bunni ah oo dhalaalaya. Ubax leh tufaax qoryo leh waxay ku yaallaan mudo dheer, laalaabkii peduncles.
Wixii budooyinkoodii abuurka dib-u-reebi karaa leh burush jilicsan.
Cayayaanka iyo cudurrada dhirta
Darlingtonia ayaa si aad ah u saameeya cayayaanka, laakiin haddii ay weli ku dhuftaan ubaxa, lama baabbi'in karo iyadoo la adeegsanayo sunta. Laga soo bilaabo cayayaanka, dhirta ayaa dhiman kara. Waxaad isticmaali kartaa uun sunta khudradda.
Laga soo bilaabo cudurada ubaxa u nugul kallana kala duwan. Xaglaha warshad geedka kalluunka ku xadgudubka xeerarka waraabinta iyo aad u hooseeya heerkulka heerkulka xagaaga.
Dhibaatooyinka dayactirka guriga
Mararka qaarkood ubaxu wuu bilaabmaa koraan oo qalaji talooyinka caleemaha. Sababta ifafadani waa heerkulka sare iyo la'aanta qoyaanka hawada. Waxaa suurtagal ah in lagu daaweeyo warshad, keliya oo bixisay shuruudaha lagama maarmaanka ah ee dayactirka.
Haddii ay jirto biyo daadi ah oo dheriga ah, oo leh dufan liidata, fungus ayaa ka soo baxa dusha ciidda. Caadi ahaan tani waxay dhacdaa marka la isku daro qoyaan xad dhaaf ah leh heerkulka hawada oo aad u hooseeya.
Darlingtonia waa in lagu meeleeyaa qol diiran, ka saar lakabka sare ee carrada oo ku shub mid cusub. Intaa waxaa dheer, waxaad u baahan tahay inaad caadeysato inaad waraabiso.
Isticmaalka dhirta gaaban ee guriga
Waa burburinta cayayaanka qolka waa hantida waxtar leh ee warshadan. Laakiin ma aha wax aad u macquul ah sida qiimaha esteeti ah waa beerashada of darlingtonia ee guriga.
Qurux aan caadi aheyn, qurxooni ah oo ka mid ah ayaa isha ku haysa isha waxayna siisaa dareeno badan oo wanaagsan.
Dhirta caleemaha waa mid ka mid ah wakiillada ugu caansan ee dhirta aduunka. Boggayaga internetka, waxaan kuu diyaarinnay maqaal ku saabsan sidii aad u kori lahayd oo u daryeeli lahayd dhirta dhifta ah ee aadka ah ee guriga: Venus flytrap, Nepentes, Rosyanka, Sarrazenia.
Aad bay u adag tahay in la koro Darlingtonia guriga, oo leh dabeecad aad u sarreeya. Laakiin quruxdiisa, quruxda qosolka leh waxay u qalantaa codsiga dadaal xoogaa ah si loo helo qaab qurux badan oo aan caadi ahayn oo qarsoodi ah.